EyoMsintsi 13, 2018 admin
BitGo ifumana imvume regulatory asethi elugcinweni crypto
Crypto sokuqalisa yokhuseleko BitGo ifumene imvume kwi-US ukuba njengomlondolozi abaqeqeshiweyo asethi digital. BitGo Trust sele siphunyeziwe yi-South Dakota Division of Banking, ithetha ukuba ngoku ukunikela abaxhasi yeziko isisombululo yokugcina olulawulwayo asethi digital, uthe ukuthotyelwa oyintloko igosa lomthetho Shahla Ali.
“kungoku nje … thina angasisisombululo online wallet eshushu, apho ukhona nakowuphi na umntu ukukhuphela software yethu size sigcine iingqekembe zabo. Siphinde anikele isisombululo onelungelo nto indibanisela isipaji ashushu nabandayo… ithemba lethu ukwakha le platform ngaphandle, ukuba ngenene ukubonisa nabalawuli kunye nabathengi ukuba le modeli unako ukusebenza kwaye singakwazi ngokwenene ukwakha inkampani intembeko enkulu njengezikhuselo asethi.” BitGo ijolise ekudaleni umnikelo lokukhulisa ekhuselekileyo ukuba sisixhobo ukuqinisekisa abatyali-zimali kunye noorhulumente basekhaya ngokufanayo ukuba cryptocurrencies uyakwazi ukunika ixabiso kula maqela. “Sabona ukuba babeza kakuhle isetyenzelwa njengomlondolozi owathi ingqalelo ngokupheleleyo asethi zazo” uthe.
Mt. Ngoku swihlawulekisi corporate Gox kunokuba kwifayile namabango Bitcoin ebuyiselwayo
Le njengabathenjwa elide-ezigugileyo Bitcoin exchange Mt. Gox ubhengeze ukuba swihlawulekisi corporate ngoku ukungena amabango ukuba uzipho umva sabanjwa Bitcoin ngokusebenzisa inkqubo yesiqhelo esivunywe ngokusesikweni kutshanje. Nobuaki Kobayashi, igqwetha-e-mthetho kunye umphathiswa kwimo for Mt. Gox uthe ukukhululwa ngoLwesithathu ukuba owayesakuba abasebenzisi wobambiswano exchange uya kuba kude Okt. 22 ukuba ifayile ubungqina usekele amabango abo kwemali-asethi crypto ezigcinwe yi exchange.
“Siye bakhululwa inkqubo yebango yokufayilisha kwimo online … leyo evumela abasebenzisi corporate ukufaka ngeziganeko zabo zamabango ngeendlela online ngokunxulumene inkqubo yokubuyisela civil,” Kobayashi uthe. Ukukhululwa kulandela Iindaba yangaphambili Mt. uye inkqubo yokufayilisha online Gox yazivula ukuya ngabanye (non-corporate) abasebenzisi kwi Aug. 23rd 2018. kungoku nje, January 24, 2019 elandelayo (kulindeleke) Umhla wenkundla apho isigqibo itrasti ziya nokuba zamkelwe okanye ilahlwe yinkundla Tokyo, ngoko yonke into ixhomekeke utshintsho elizayo.
Blockchain kunganyusa yimali yorhwebo yi $ 1T
Blockchain uyakwazi ukugcwalisa enkulu $1.5 yezigidigidi-dollar umsantsa yonikezelo-imfuno ezimalini kurhwebo lwehlabathi ngokudambisa ngezimali amancinci- kunye namashishini naphakathi kwiimarike ezisakhulayo, yophando olutsha uthi. Ngokuhlanganyela luyaqhutywa kukhutshwa yi-World Economic Forum kunye iBain & Company, uphando lubonisa, ngokuthi ekunabiseni blockchain, amashishini jikelele uyakwazi ukwenza i extra $1 zezigidi ngo yimali yorhwebo ebekungayi kuba baphoswa.
Ngokutsho yokubala Asian Development Bank, umsantsa yimali yorhwebo lwehlabathi ngoku kwi $1.5 zezigidi kwaye kuqikelelwa ukuba kukhule ku $2.4 zezigidi ngo 2025. Uphando ichaza ukuba lo mba becala evukayo ukufikelela olungephi ukuya ngetyala kunye mboleko ngenxa SME ukuba ufuna ukwandisa amashishini abo, ekubeni networks bahambisa bayakwazi ukwabelana iirekhodi zoshishino kuzo kumaziko mali ahambelana nokuhanjiswa kweenkonzo uze uzise ukungafihli kumashishini’ ukuthembeka. “Babeza kunceda ukunciphisa ingozi credit, iifizi eziphantsi kwaye susa izithintelo yorhwebo,” ngabaphandi bhala.
OKCoin exchange crypto uyakhula ku 20 ngaphezulu US States
Sekudlule phantse omnye ngonyaka ukususela omnye ezinkulu ukutshintshiselana cryptocurrency wehlabathi kwanyanzeleka ukuba zivaliwe iingcango zalo ngakumbi emva kokuba ebekwe ngurhulumente-ban sorhwebo. ngoku, ukuba exchange, i owayekade China-based OKCoin, into eying uzakubuyiswa kwelinye icala lehlabathi. Ngoku izinze e San Francisco, OKCoin kaThixo U.S. som imemezele ngoLwesithathu ukuba ufumene imvume yokulawulwa ukwandisa zibe 20 lithi ezintsha, ukwandisa kakhulu ukufikelela yayo komnye kwiimarike crypto inkulu ehlabathini.
"Ukuze kwimarike cryptocurrency ukuba ufikelele kwisakhono sawo esipheleleyo, yokutshintshiselana ezifana OKCoin kufuneka asebenze kunye nabalawuli ezikhoyo kunye entsha lwemali ukuguqulelwa virtual, impahla digital, kunye / okanye imali,"Said Tim Buyn, CEO yomsebenzisi irandi xa. "Iqela lethu liye basebenza ngenkuthalo ngaphakathi yobunzima ezi zikhokelo zolawulo US. Siyavuya ukuba siqhubele eli nyathelo enkulu njengoko ijolise ekuncothuleni imiqobo ethintela imarike zehlabathi ngokwenene asethi yedijithali eqikelelayo imimiselo elide lusekiwe. "Ngaphambili, OKCoin USA wayezamkela kuphela kubathengisi e California, apho wakhanga ngeenxa $700,000 unyuse ngemihla, olusuka ephathelene 125 phakathi tshintshiselwano lwehlabathi, ngalinye CoinMarketCap.
Ingxelo Daily Market Kraken for 12.09.2018
$136M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
EyeDwarha 30, 2018 e 1:25 AM